प्रहरीले अचानक रेड हान्दा २ युवतीसहित ७ जना यस्तो अवस्थामा पक्राउ « Janaboli
काठमाडौं । गम्भीर अ’परा’धमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रदेश नम्बर ३ को हेटौडाबाट प्रहरीले आधा दर्जन बढी व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । मकवानपुर प्रहरीले शुक्रबार हेटौंडा–९ स्थित सुरेश त्रिपाठीको घरबाट ला’गुऔ’षध प्रयोगकर्ता सातजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
दुईजना युवतीसहित सातजनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिएको हो । हिजो साँझ साढे ५ बजेको समयमा इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरबाट खटिएको गस्ती टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । त्रिपाठीको घरमा शंकास्पद अवस्थामा मानिस बसेको उनीहरूलाई सुरक्षा जाँच गर्दा ला’गुऔ’षध गाँ’जालगायतका सामानहरूसहित फेला परेका हुन् ।
पक्राउ पर्नेहरु क्रमशः हेटौँडा–हेटौँडा-१० का २० वर्षीय संगीत रायमाझी, १८ वर्षीया दिक्षा भट्टाचार्य, १८ वर्षीया निशा कुशवार, हेटौँडा-४ का २६ वर्षीय सन्दीप न्यौपाने, हेटौँडा-९ का २५ वर्षीय विश्वजंग रायमाझी, हेटौँडा-५ का १८ वर्षीय अभिसेक ठकुरी र हेटौँडा-१ का २५ वर्षीय निखिल लामालाई पक्राउ गरेको छ ।
ला’गुऔ’षध प्रयोगकर्ताको साथबाट प्रहरीले ला’गुऔ’षध गाँ’जा ५७० ग्राम, ला’गुऔ’षध गाँ’जाको धुलो ८० ग्राम, बाँसमा कालो टेपले बेरेको चि’मनी १ थान, माटोको चि’मनी १ था’न, लाई’टर १ था’न, मू’र्ति जस्तो देखिने चि’मनी १ थान, ग्यास रि’फिल ३०० ए’मए’लको १ था’न, अन’टेस्ट स्कु’टर एउटा, ना. ५३ प २७३४ नम्बरको स्कुटर र ना. २२ प ३९४८ नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल ब’राम’द भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। आवश्यक अनुसन्धान तथा कार्वाही जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
घरको छानामा थुप्रिएको असिना साबेलले हटाउँदै [तस्बिरसहित]
पोखरा घरको छानामा थुप्रिएको असिना हटाउँदै युवा : घरको छानामा थुप्रिएको असिना साबेलको सहायताले हटाउँदै
सुर्खेत । कोभिड–१९) संक्रमणबाट जोगिन दुर्गमका गाउँलेले नवागन्तुकलाई गाउँ पस्न पूर्ण रोक लगाएका छन् ।